मध्य-गर्मी मा 2013 सुदूर पूर्व एक भयानक विपत्तिजनक बाढी भइरहेको छ। यस समयमा सुदूर पूर्व मा बाढी 46 000 m³ / को मात्रा मा Amur नदीमा पानी को एक प्रवाह गर्न पुगे। तुलना लागि, आदर्श 18-20 हजार m³ / को भित्र खपत छ। यो घटना सबै रेकर्ड भङ्ग र अवलोकन को 115 वर्ष मा सबै भन्दा ठूलो भयो। बाढी लागि मुख्य कारण समय लामो अवधिमा तीव्र वर्षा मानिन्छ।
रूसी Amur क्षेत्र भर
को मा बाढी रूसी सुदूर पूर्व Amur क्षेत्र, खबरोभ्स्क क्षेत्र र यहूदी स्वायत्त क्षेत्र: हदसम्म तीन क्षेत्रहरु प्रभावित। यी क्षेत्रमा, यो कृषि भूमि को एक विशाल राशि, दस अरब rubles को कुल संख्या भोगे। अधिशेष पानी पूर्ण जलाशय को Bureya र Zeya जलविद्युत स्टेशन स्वामित्वको भर। यो बाढी लेट अगस्ट मा शुरू भयो, र पहिले नै अगस्ट 30, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मा क्षेत्र भ्रमण गरेको छ। आफ्नो भ्रमणको रूपमा उहाँले व्यक्तिगत हेलिकप्टर द्वारा भर क्षेत्र inspected र प्रभावित क्षेत्रहरु को टाउको को रिपोर्ट अध्ययन। व्लादिमीर Vladimirovich को परिणाम अनुसार सबै शक्तिहरु Viktora Ishaeva, को मा राष्ट्रपति दूत मुक्त जानकारी प्राप्त सुदूर पूर्वी संघीय जिल्ला। Yakutia, Amur क्षेत्र, Primorsky र खबरोभ्स्क क्षेत्र र यहूदी स्वायत्त गणतन्त्र: आपतकालीन को अगस्ट7राज्य सुदूर पूर्व पाँच क्षेत्रहरु मा भएको थियो।
को Amur क्षेत्रमा नतिजा
को Amur क्षेत्र मा बाढी अन्तर्गत सय बीस-छ बस्तियों पायो छ। भर आश्रय 36.339 मान्छे बिना बाँकी जो आठ हजार घरहरू, तिनीहरूलाई बच्चाहरु को दस हजार थिए। पनि बाढी अन्तर्गत बीस हजार उद्यान र उपनगरीय क्षेत्रमा थिच्नुहोस्। आपतकालीन मोड, 23 जुलाई 2013 देखि 1 अक्टोबर 2014 गर्न Amur क्षेत्र थप एक वर्ष भन्दा मा राखिएको छ। खाली मदत गर्न उपायहरूको सुरु गरेपछि सिकार एक भन्दा बढी सय बीस हजार मानिसहरू पाए।
सुदूर पूर्व मा वर्ष बाढी, सदाको जस्तै फैलयो। यो दर्दनाक र खबरोभ्स्क क्षेत्र वसोवास को जीवन भयो। सेप्टेम्बर 14 मा त्यहाँ भर 77 बस्तियों दर्ता गरेका थिए। तीन हजार घरहरू, 35 हजार द्वारा Inhabited सहित। मान्छे। खबरोभ्स्क मा, पानी स्तर रोक बिना तेह्र दिनको लागि उठ्नुभयो। सुरुमा यो 716 सेमी, डरलाग्दो बिन्दु माथि 116 सेमी र 74 सेमी लामो रेकर्ड स्तर थियो। द्वारा 31 अगस्ट, वरिपरि 784 सेमी सेप्टेम्बर 1792 सेमी को स्तर मा लिपिबद्ध भएको थियो, र480 सेमी लागि। कटौती मात्र सेप्टेम्बर 5th देखिएको थियो।
पहिलो कारण - अवरुद्ध anticyclone
पहिलो सुदूर पूर्व मा बाढी को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र महत्वपूर्ण कारण साइबेरिया र सुदूर पूर्व दक्षिणी भाग मा हावा जनता को परिसंचरण को प्रक्रिया मा असामान्य परिवर्तन गर्न थाले। यो असंतुलन उच्च शक्ति lingering cyclones को गठन गर्न नेतृत्व गरेको छ। स्थिति राम्रो समझ लागि यो भर क्षेत्रहरु मा चिस्यान र तापमान को मापदण्डहरु विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। चीन उत्तरी क्षेत्र को गर्मी मा बाढी एक उच्च तापमान अवस्था, उच्च आर्द्रता सँगसँगै अनुभव अघि त। Yakutia भन्दा एकै समयमा कम तापमान सुक्खा हावा छ। को कारण एक रोकावट anticyclone प्रशान्त महासागर माथिको देखिन्छ यो अवस्था खडा भएको छ। यो लहर को Amur क्षेत्र भन्दा एक शक्तिशाली चक्रवात द्वारा रोकियो। त्यो अवरोध anticyclone Okhotsk समुद्रको मा चक्रवात भाग्न आवश्यक गति संग अनुमति छैन। फलस्वरूप, यस Amur क्षेत्र मा जुलाई 2013 द्वारा स्थिर frontal क्षेत्र सक्ने। यो दुई महिनाको लागि सफलता धनी ट्रपिकल चिस्यान cyclones सार्दा छ। के Amur र यहूदी स्वायत्त क्षेत्र भन्दा वार्षिक वर्षा को हानि को कारण थियो। परिणाम अनुसार बाढी क्षेत्रहरु, सुदूर पूर्व मा एक बाढी लागि नेतृत्व जो सबै को एक साथ सक्रियता थियो। पहिले, एकचोटि सबै क्षेत्र एक सिंक्रोनस सक्रियता अवलोकन गरेका थिए। सुदूर पूर्व मा बाढी रोक्न क्रममा, यो पहिलो बाढी को Sungari र Ussuri मा, अगस्त को अन्त को आसपास, माथिल्लो Amur र तूफान मा भयो, र पछि आवश्यक छ।
दोस्रो कारण - हिउँ जाडो
को Amur बेसिन भित्र सुदूर पूर्व मा बाढी ट्रिगर एक हिउँ जाडो र ढिलै भएपनि वसन्त भन्दा अवलोकन गरिएको छ। यो कारण छैन त्यसैले यसको शीर्षक सार्थक हुन थाल्छ, तर आफ्नो रूप अपरिवर्तनीय नतिजा गर्न नेतृत्व गरेको छ। जुलाई 2013 को सुरुमा एक बाढी गर्न नेतृत्व यी कारक, 70-80% को दायरामा पर्याप्त माटो पानी संतृप्ति प्रदान। यो अवस्था एक स्थायी आधार लाग्न सक्छ कि एक खतरा छ। एक महत्वपूर्ण भूमिका र वन आगो फँडानी संग प्ले। यसको लागि वन संरक्षण कार्य जिम्मेवारी छ, तर, दुर्भाग्य, सुदूर पूर्व यस रक्षा संयन्त्र गणना गर्न सक्छ।
एक भयानक बाढी निशान
वास्तवमा, बाढी को Amur र मागाडान क्षेत्र, Primorsky र खबरोभ्स्क क्षेत्र, यहूदी स्वायत्त प्रान्त र साखा को गणतन्त्र सहित छ क्षेत्रहरु, प्रभावित। सबै भन्दा ठूलो आघात को Amur क्षेत्र मा आए। मो अनुसार, सुदूर पूर्व मा अन्त मा 8 लाख भन्दा बढी वर्ग मी कुल क्षेत्र भर गरिएको छ। पानी podtopilo तेह्र र एक हजार आधा घरहरू, तिनीहरूलाई पाँच एउटा थप आवास को लागि पूर्ण अयोग्य भए। प्रकोपबाट तीस-दुई हजार निकासी अन्तर्गत गिर, एक सय र सुदूर पूर्व पैंतीस हजार बासिन्दा छोयो। बाढी प्रभावित सडक (1.6 thous। किमी), पुल (174 पीसी।) अनि सामाजिक सुविधाहरु (825 पीसी।)। कृषि वर्षको लागि विशेष unprofitable थियो। पर्याप्त खाना आधार procure क्षमता कमी गाई र दूध कमी लागि भोक जाडो गर्न नेतृत्व गरेको छ। सम्म 2013, जस्तै प्रभाव संग सुदूर पूर्व बाढी अवलोकन गरेका थिए।
एक कठिन अवस्थामा मदत
सुदूर पूर्व जसको फोटो लाखौं मानिसहरू स्तब्ध, मा बाढी, चिडचिडा कारण। दुर्घटनामा तयार गर्न सक्दैन द्वारा हुन, त्यसैले बाढी बिल्कुल सबै स्थानीय डराएका। धेरै मानिसहरू सिकार समर्थन गर्न र तिनीहरूलाई मदत गर्न हतारिएको। बाढी (सुदूर पूर्व) निवास ठाउँ र मानिसहरूको ठूलो संख्या रकम अस्तित्व बिना बाँकी। मानवीय सहायता र बाढी प्रभावित मान्छे को लागि धन, गर्न सक्छन् सारा संसार भन्न संकलित, हामी थियो। यस प्रक्रियामा, व्यवसाय, संगठन र रूस र विदेशी देशहरूको फरक क्षेत्रका साधारण मान्छे को एक किसिम उपस्थित। सेप्टेम्बर 2013 को सुरुमा बेलारुस को गणतन्त्र को आपतकालीन अवस्थाहरू मन्त्रालय डिब्बाबंद खाना र बच्चा खाना को एक किसिम को प्रभावित 43 टन प्रदान। एक महिना पछि, बेलारुस आइपुगे देखि, पीठो 100 टन र क्यान्ड मासु 50 टन को मद्दत अर्को वितरण। सेप्टेम्बर को अन्त गर्न सेन्ट पीटर्सबर्ग देखि भोजन, लुगाफाटा र बिछ्यौना को 35 टन पुगेको छ। Sverdlovsk क्षेत्र को UMMC कर्मचारीहरु मानवीय सहायता को 45 टन संकलन गरेका छन्। Astrakhan प्रहरी पनि indifferent रहने र 5.5 मिलियन rubles को मात्रा मा नगद सिकार मदत गर्नुभयो। साथै, 11 लाख rubles। यो बेलग्रेड प्रहरी आए। व्यवस्थापन देखि नियाग्रा को खबरोभ्स्क क्षेत्रमा सिकार बाढी सहायता लाख येन प्रविष्ट गर्नुभयो। यो, पाठ्यक्रम, सबै समयमा उदाहरणहरू वस्तुतः सबै मदत गर्न इच्छुक थिए।
Quay Kharkov: विगत, वर्तमान, आकर्षण
कसरी कागज बाहिर एक बल बनाउने?
को धूम्रपान को फोक्सोमा खाली हुन्छ। यो फोक्सोमा खाली गर्न सम्भव छ?
अमेरिकी निर्देशक ली Strasberg: जीवनी, चलचित्र
खाजा tartlet - एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण